भर्ने हैन त ? पाँचथर पावरको आइपीओ हेर्नुहोस्, कति कित्तासम्म पाईन्छ भर्न « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
भर्ने हैन त ? पाँचथर पावरको आइपीओ हेर्नुहोस्, कति कित्तासम्म पाईन्छ भर्न
काठमाडौं । पाँचथर पावर कम्पनीको फागुन १३ गतेदेखि आइपीओ खुलेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयले नकिनेको ७ लाख ८७ हजार ७५० कित्तासमेत थप गरी कुल १७ लाख ५० हजार २५० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो । यसमध्ये कर्मचारीलाई ३५ हजार ५ कित्ता र सामुहिक लगानी कोषलाई ८७ हजार ५१२ कित्ता छुट्याएर बाँकी रहेको १६ लाख २७ हजार ७३३ कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिंदैछ ।
इच्छुक लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सी–आस्वाको प्रणली मार्फत आवदेन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा छिटोमा फागुन १६ गते आवेदन गर्न सकिनेछ । त्यस अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरे चैत १२ गते सम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
यसअघि कम्पनीले पुस ३० देखि माघ २९ गतेसम्म पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका तथा हिलिहांग र फालेलुंग गाउँपालिका स्थानीयलाई ९ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । यसमा स्थानीयले १ लाख ७४ हजार ५०० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिएका थिए ।
पाँचथर पावरले पाँचथर जिल्लामा १४.९ मेगावाटको ’हेवा खोला ए’ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १७ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ । यसको साधारण लगानी फिर्ता हुन ८.९४ वर्ष लाग्नेछ । कम्पनीले चालु आवमा ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने योजना बनाएको छ ।
२०७५ फागुन १३ गते प्रकाशित